Ngenisa i-Equation kwi-TI-84 kunye ne-Solver Solver
Ngu C. C. Edwards
Isinyathelo sesibini sokusombulula i-equation kwi-TI-84 Plus ye-graphing calculator ye-Equation Solver kukungena okanye ukuhlela i-equation ukuze isonjululwe. Inyathelo lokuqala kukuseta imowudi. Ukufaka i-equation entsha kwi-Equation Solver, landela la manyathelo:
Cinezela [MATH]  ukufikelela kwi-Equation Solver kwimenyu yeMat.
Isisombululo sokulinganisa sivela. Isikrini sokuqala sibonisa i-Equation Solver xa kungekho nxaki igcinwe kwiSolver; umfanekiso wesibini ubonisa iSolver kunye ne-equation egcinwe kuyo ngoku.
Ukuba i-Equation Solver yakho sele iqulethe i-equation, cinezela rhoqo
Isikrini esibizwa ngokuba yi-EQUATION SOLVER siyavela.
Ukuba ufuna njalo, cinezela [CLEAR] ukucima nayiphi na inxaki kwiSolver uze ufake i-equation ofuna ukuyisombulula.
Inxaki oyifakayo kufuneka isethwe ilingane no-zero kwaye inokuba neenombolo zokwenyani kuphela. Umzekelo, ukuba ufuna ukusombulula indawo equation A = L * W, yifake njengo-0 = A - L * W okanye njengo-0 = L * W - A.
Cinezela [ENTER] ukungena kwi-equation kwisisombululo.
Ungakwazi kwakhona ukuhlela i-equation esele ifakwe kwi-Solver Solver ngokuphinda amanyathelo amabini okuqala kwaye ucinezela [ENTER] xa ugqibile.
usebenzisa ii-opiates kwi-vivitrol
ungayidibanisa i-naproxen kunye ne-ibuprofen
loluphi udidi lweziyobisi icocaine